अर्थमन्त्रीको आग्रहः ऋण लिएर गाडी नकिन्नोस् !
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘क्रेडिट कार्ड’ को अर्थतन्त्र विश्वमा धरासायी भएको उदाहरण दिँदै आम नागरिकलाई भनेका छन्- ‘कमाएर गाडी किन्नुहोस् । ऋण लिएर, ऋण तिर्ने क्षमता विकास नभई गाडी नकिन्नुहोस् ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्यक्रममा गरेको संवोधनको सारांश उनकै शब्दमाः
नाडाको मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, गाडी किन्ने रहर लागिराख्छ । उहाँहरुलाई रहर नलागे त गाडीको व्यवसाय नै चल्दैन । तर, मैले उहाँलाई के भन्याथें भने कमाएर गाडी किन्नुहोस् । ऋण लिएर गाडी धेरै नकिन्नुहोस् । ऋण तिर्ने क्षमता विकास नभई धेरै गाडी नकिन्नुहोस् । क्रेडिट कार्डको इकोनोमी कसरी कोल्याप्स भयो भनेर हामीले २००७/०८ को विश्व अर्थ हेर्‍यो भने पुगिहाल्छ । हामीले त्यो अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्‍यो ।
अटो डिलर साथीहरुसँग मेरो अनुरोध छ, हामी आयात प्रतिस्थापन भन्दैछौं भने वातावरणमैत्री सवारी साधनको कुरा आएको छ । आम सार्वजनिक यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढी जोड दिउँ भन्ने कुराहरु आएका छन् । यसमा सरकारको प्राथमिकता छ । हामीले विद्युतीय सवारी साधनका लागि वा ठूलो सार्वजनिक यातायातको साधनका लागि अलि बढी प्राथमिकता दिएका छौं । त्यसमा तपाईंहरुको सहयोग र सहकार्यको हामीले अपेक्षा गरेका छौं । तपाईंहरु आउनुस्, हामीसँगै यसमा काम गरौं ।
चोरी पैठारी र भन्सार दरका कुराहरुमा केही सम्बन्ध छ । तर, यस्तो पनि स्थिति हुन्छ, चोरी पैठारी हुन्छ भनेर भन्सारको दर घटाउँदै घटाउँदै शुन्यमा लगे पनि यो रोकिहाल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने, त्यसपछिका अरु प्रक्रियाहरु त बाँकी रहन्छन् ।
मलाई के लाग्छ भने, भन्सारको दर घटाएपछि बढी राजस्व आउँछ भन्ने सिद्धान्त पनि विकास भएको थियो विगतमा । त्यो सिद्धान्तले हामीलाई कहाँ लैजान्छ भने भन्सारको दर शून्य गर्‍यो भने राजस्व चाहिँ असीमित रुपमा बढ्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित हुन्छ । त्यो कहाँबाट होला ? अर्थशास्त्रको कुनै सिद्धान्तले दिँदैन ।
हाम्रो प्रयास के भने, चोरी पैठारी हुने विन्दुमा प्रशासनिक संयन्त्रबाट यसलाई रोक्ने हो । भन्सारका दरहरु अटोमोबाइलको राजस्व संरचना परिवर्तन गर्दै जाँदा यिनीहरुमा पनि स्वभाविकरुपमा परिवर्तन हुँदै जान्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिने नै छ ।
अलिकति आन्तरिकरुपमा स्पेयर पार्ट्स, टायर, ट्युब लगायतका कतिपय कुराहरुको उत्पादन गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ हामीले संरक्षण दिने कुरामा लाग्छौं । गोरखाकाली टायर उद्योग तपाईंहरु सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी आह्वान गर्न सक्छौं । यस्ता अरु कतिपय कुराहरु हुन सक्छन् । त्यो संरक्षण हामी अलिकति बढी दिन्छौं ।
हामी चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्छौं । र, दरहरु पनि क्रमशः आगामी दिनहरुमा डब्लुटीओ, साफ्टा आदि भोलि कार्यान्वयनमा आयो भने बिमस्टेक समेतका प्रावधानहरुलाई पनि सम्वोधन गर्दै जाने हो ।
हामी एउटा सन्तुलित भन्सार नीतिमै पुग्ने हो । त्यो पुगुञ्जेल हामीलाई हाम्रो आन्तरिक क्षमता बढाउनलाई अलिकति समय दिनुस् ।
हामी आन्तरिकरुपमा राजस्वको आधार, कमसेकम दुई तिहाई राजस्व मुलुकको आन्तरिक स्रोतबाटै उठ्ने स्थिति भएपछि भन्सारमा विचार गछौर्ं । होइन भने अहिले भन्सारमा आधारित मूल्यअभिवृद्धि कर, आयात हुने वस्तुको नाफामा लाग्ने आयकर समेत जोड्दा ५० देखि ६० प्रतिशत हाम्रो आम्दानीको स्रोत चाहिँ व्यापारमा आधारित भइराखेको हुन्छ । यसलाई हामीले व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउका लागि पनि केही प्रयास गरेका छौं ।
हामीले केही औद्योगिक संरक्षणका कुराहरुलाई ल्याएका छौं । र, यी काम सुरु भइसकेका छन् । म के भन्छु भने केही समय हामीले तपाईंसँग मागेका छौं । यी सुधारहरु क्रमशः हुँदै जानेछन् र भन्सार प्रशासनलाई शुद्ध बनाउने, पारदर्शी बनाउने र सदाचारी बनाउनेमा हाम्रो जोड रहनेछ । कहीँ कतै गल्ती भएको देखिए सोझै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला । हामी ती ठाउँमा कारवाही गर्न पछि पर्ने छैनौं ।
हामी व्यापार घाटाको पनि चिन्ता गरिरहने । आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र कतिपय वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहने । ऋण लिएर होइन, कमाएर उपभोग गर्नुपर्छ पनि भनिरहने । अथवा मुलुक आत्मनिर्भर, स्वावलम्वी बन्नुपर्छ पनि भनिरहने । अनि बाँकी अटोमोबाइल सम्बन्धी सप्पै गुनासो राखिरहने । यसको बीचमा हामीले काँही तालमेल खोज्नुपर्छ ।
क्रेडिट कार्डको इकोनोमी विश्वमा कोल्याप्स भयो । ऋण तिर्ने क्षमता विकास नभई धेरै गाडी नकिन्नुहोस् । कृत्रिम रुपमा देखाइएका उपलब्धिहरु भोलि बेलुनझैं फुट्न सक्छन्
आर्थिकरुपमा हामी सबल हुँदै जाँदा, मुलुक आधुनिकीकरण हुँदै जाँदा, जीवनशैली आधुनिक हुँदै जाँदा, हाम्रो आर्जन गर्ने क्षमता बढ्दै जाँदा र एफोर्ड गर्ने क्षमता सँगसँगै बढ्दै जाँदा त हामीले उपभोगलाई अघि नबढाइकन आर्थिक वृद्धि हुँदैन ।
तर, त्यो उपभोग जहिले पनि हाम्रो आम्दानीमा आधारित हुनुपर्‍यो, हाम्रो क्षमतामा आधारित हुनुपर्‍यो । सप्पै ऋणमा आधारित उपभोगले हामीलाई दिगोकालसम्म विकास दिँदैन, यो कुरो मैले भन्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो कुरा, हामीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा अलि बढी नै कर लगाएका छौं । यो भन्सारको मात्रै कुरा पनि होइन । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको मान्यताअनुरुप हामीले यस्ता करहरुलाई मिलान गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो गर्नेबित्तिकै हाम्रो राजस्वको १५ प्रतिशत अटोमोबाइल क्षेत्रबाट आउँछ ।
अनि अटोमोबाइलको आयातचाहिँ हामीले भन्सार घटाउने, सडकचाहिँ जति बढ्दै आउँछ, अटोमोबाइलको संख्या त्यति नै विस्तार गर्दै जानुपर्ने । अघि मैले भनेको ऋण लिएर धेरै काम नगर्ने, हाम्रो आम्दानीले काम गर्ने भन्ने मेरो सिद्धान्तलाई फेरि त्यसले युक्तिसंगत बनाउँदैन ।
सडक बनाउन त फेरि राजस्व चाहियो । राजस्वका लागि आधार चाहियो । अहिले हाम्रो भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणाली हो । विस्तारै भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै लैजानु छ । तर, आन्तरिक उत्पादनमा अलिकति पनि करको कुरा गर्दा हाम्रो क्षमताका प्रश्न आए, तिर्न सक्ने कुरा आए, संरक्षण दिनुपर्ने कुरा आए ।
बाल्यावस्थाका उद्योगहरुलाई यति धेरै कर किन ? भन्ने विषय आउँछ । अनि राज्यले कर पनि नउठाउने । विकास पनि धेरै गर्नुपर्ने । सडकको विस्तार पनि गर्नुपर्ने ।
धेरै ऋण लियो भने त त्यो ऋण तिर्नलाई क्षमता नपुग्ने भन्ने कुरो त फेरि मेरो सिद्धान्त नै भयो । यो असम्भव कुराहरुको बीचबाट हामीले केही सम्भाव्य समाधानहरु निकाल्नुपर्छ । जहाँ जसलाई जे राम्रो लाग्छ, त्यही बोल्दिने अर्थमन्त्री भयो भने त के रमाइलो होला र । यसो माहोल हेर्‍यो अनि त्यही कुरा बोल्दियो । भोलि अर्को दिन अर्कै बोल्यो । पर्सि अर्को दिन अर्कै बोल्यो । सम्भवतः मेरो जीवनमा म त्यस्तो बोल्दै बोल्दिनँ ।
मेरो प्रोफेसनल जीवनमा २० औं वर्षदेखि मैले त्यही कुरा भन्दै आएकोछु, जुन आज पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु । यो भनिरहँदा, गरिरहँदा तत्काल केही नतिजाहरु नआउन सक्छन् ।
किनभने, सुधार भन्ने कुरो त्यति सजिलो छैन । बोलेर सुधार हुने भएदेखि त बोलिन्थ्यो होला । तर, गरेर सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ । संरचनागत समस्याहरु छन् । त्यसलाई हल गर्नुपर्ने कुराहरु छन् ।
हामीले बजेट कार्यान्वयन गरेको दुई महिना भर्खर पुग्न लागेको छ । त्यसो हुनाले अहिले हामीले रिजल्ट खोज्नका लागि केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ । हामीले कृत्रिमरुपमा देखाइएका उपलब्धिहरु भोलि बेलुन फुटेझैं फुट्न सक्छन् । दरिलो आधार भएका उपलब्धिहरुको बाटोमा हामी हिँड्या छौं । त्यसो हुनाले मेरो अनुरोध के छ भने तपाईंहरुले यसमा सरकारलाई पर्ख र हेरकै अवस्थामा राखिदिनुस् । राम्रो गर्‍यो भन्न जरुरी छैन ।
तर, सरकारले ६ महिनामै केही गरेन भनिरहँदाखेरि यति लामो समयसम्म योभन्दा अगाडि नभएका कुराहरु छन् । २० औं, ३० औं वर्षसम्म मुलुकमा आर्थिक विकृति, आर्थिक अनियमितता र अनुशासनहीन तुल्याइएको अवस्था हो । हामीले सुधारका कामहरु अघि बढाइरहँदा ६ महिनामै सप्पै सुधार भइसक्छ भन्ने तपाईहरुको सदाशयताका लागि म धन्यवाद दिन्छु । तर, त्यो अव्यवहारिक थिएन ।
अब हामीलाई तपाईंहरुले सुझाव पनि दिँदै जानुस् । हामी गर्दै पनि जान्छौं । यो सहकार्यको यो बेला हो । अर्को पक्षलाई दोष दिएर हामीले आफ्ना कमजोरीहरु लुकाउनु पनि हुँदैन । सरकार यसमा बढी सचेत छ । म यसमा बढी सचेत छु ।
निजी क्षेत्रसँग सहयोगको वातावरण हामीले बनाउने हो । सहकार्यको वातावरण पनि हामीले बनाउने हो । त्यसमा आइदिनुपर्छ तपाईंहरु । हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । त्यसमा तपाईंहरुको तयारीको पनि मेरो उच्च अपेक्षा रहन्छ, हामी अघि बढौं ।
लगानीसम्बन्धी कानून तर्जुमाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अरु कतिपय कानूनहरुलाई हामी निजी क्षेत्र मैत्री बनाउँदैछौं । बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई समाधान गर्नेतर्फ धेरै प्रयास गरेका छौं । बाहिरबाट पनि बैंकहरुले ऋण लिएर तरलता इजेक्सन गर्ने वातावरण बनेको छ । ब्याज दरमा क्रमिकरुपमा सुधार होला, तरलतामा सुधार भएसँगै । त्यसअनुसार बजारमा पुँजीको उपलब्धता पनि होला । त्यही अनुसार अटो उद्यमले पनि ऋण पाउने अवस्था सहज होला ।
तर, हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जब विकासको एउटा आर्थिक वृद्धिको एउटा चरणमा प्रवेश गर्छौं, तब हामीलाई अत्यन्त धेरै स्रोतको माग हुन्छ । त्यो मानेमा बैंकको ऋणको पनि माग हुन्छ, त्यो ऋणको माग पूरा गर्नलाई बैंकिङ प्रणालीले थप साधन स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिकरुपमा त्यो गर्ने भनेको बचतै हो । त्यो भनेको आन्तरिकरुपमा राजस्व बढाउने पनि कुरा हो ।
यहाँनेर हामीले कतै फेरि बचत बढाउने र वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने कुरामा कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन ।